Achọpụtala Njehie na Njikwa
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Achọpụtala njehie na faịlụ xxxx.pst…
Zuru ezu Ozi banyere "Njehie Achọpụtala na Njikwa" Error
Mgbe ị mepee faịlụ Outlook PST mebiri emebi ma ọ bụ nke rụrụ arụ na Microsoft Outlook, ị ga-ahụ ozi njehie na-esonụ:
ebe 'xxxx.pst' bu aha nke Outlook PST faịlụ a ga-emeghe.
PST faịlụ nwere akụkụ abụọ, isi faịlụ, na akụkụ data na-esonụ. Isi ihe faịlụ nwere ihe most ozi dị mkpa gbasara faịlụ ahụ dum, dịka mbinye aka faịlụ, nha faịlụ, ndakọrịta, wdg.
Mgbe Microsoft Outlook na-anwa imepe faịlị, ọ ga-ebu ụzọ gụọ akụkụ nke isi wee nyochaa ozi ya, dịka ọmụmaatụ, mbinye aka faịlụ yana ozi ndakọrịta. Ọ bụrụ na ndị nkwenye ada ada, ọ ga-akọ na “Faịlụ xxxx.pst abụghị onye nchekwa faịlụ.” njehie. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-aga n'ihu na-agụ akụkụ data fọdụrụnụ ma ọ bụrụ na enwere njehie na akụkụ ahụ, ọ ga-akọ akụkọ njehie a kpọtụrụ aha n'elu, ma tụọ aro ka ị jiri ya Igbe mbata igbe mbata (Scanpst.exe) idozi ya.
Ma maka most okwu, scanpst enweghị ike idozi njehie ahụ, ịkwesịrị iji ngwaahịa anyị DataNumen Outlook Repair iji rụkwaa faịlụ PST rụrụ arụ ma dozie nsogbu ahụ.
I nwekwara ike ịhụ njehie a mgbe ị na-eji Outlook 2002 ma ọ bụ nsụgharị dị ala na faịlụ PST ruru ma ọ bụ karịa ya 2GB oke file size. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, naanị DataNumen Outlook Repair nwere ike inyere gị aka.
Ihe nlele nke PST rụrụ arụ nke ga - akpata njehie ahụ. Outlook_2.pst
Faịlụ natara site DataNumen Outlook Repair: Outlook_2_fixed.pst
“Faịlụ xxxx.pst abụghị onye nchekwa faịlụ.” njehie.
Ihe Ọmụmaahịa Microsoft Nkeji edemede 272227: Otu esi achọ ma na-agba ọsọ Ngwaọrụ Mmezi na Outlook